तीनवटा खुट्टा भएको कुकुरले बचायो बालकलाई
काठमाडौं – थाइल्यान्डमा तीनवटा खुट्टा भएको एउटा कुकुरले नवजात शिशुको ज्यान बचाएर नायकको काम गरेको छ ।
घटनापछि मानिसले कुकुरको खुबै प्रशंसा गरिरहेका छन् ।
पन्ध्र वर्षकी एक किशोरी गर्भवती भएपछि निकै लजाइन् र उनले आफ्ना मातापितालाई यो कुरा लुकाइन् । बच्चा जन्मेपछि उनले त्यसलाई जलाउन खोजिन् तर कुकुरले त्यो देख्यो अनि कराउन थाल्यो ।
पिङ पोङ नामक कुकुरको आवाज सुनेर मालिक घटनास्थलमा आए अनि अन्य व्यक्तिले पनि बच्चालाई सुरक्षित बाहिर निकाले ।
फोहोर राखिएको ठाउँमा बच्चालाई देखेर कुकुर निकै भुक्यो अनि आगो निभाउने कोशिश गर्न थाल्यो । स्थानीयहरू हल्ला सुनेर घटनास्थलमा आए र प्याकेटमा बच्चाको गोडा देखेर छक्क परे । बच्चालाई उनीहरूले तत्कालै अस्पताल लगे । त्यहाँ चिकित्सकहरूले प्राथमिक स्वास्थ्य जाँचपछि बच्चा स्वस्थ रहेको बताए ।
आरोपित आमालाई पक्राउ गरिएको र बच्चालाई हत्या गर्ने कोशिश गरेको मुद्दा लगाइएको छ । लेफ्टिनेन्ट कर्नल पानुवत पुटकामले बैंकक पोस्टलाई बताए, ‘बच्चाकी आमा नाबालिका हुन् तर कानून अन्तर्गत उनीमाथि मुद्दा चल्छ । उसलाई बालअधिकार कार्यकर्ताको उपस्थितिमा सोधपुछ गरिनेछ । बच्चीको मानसिक स्वास्थ्यको पनि जाँच गरिनेछ ।’
पिङ पोङका मालिकले ऊ निकै बफादार र आज्ञाकारी भएको बताए । दुर्घटनामा परी एउटा खुट्टा काम नलाग्ने भए पनि गाउँका सबै मानिसले उसलाई माया गर्ने र उसले अहिले निकै राम्रो काम गरेको उनको भनाइ छ ।
बिरालोले गर्‍यो खतरनाक स्टन्ट (भिडियो)
यी महिला जिममा पसिना हैन, रगत बगाउँछिन्
यस्ता काम गर्नुभएको छ ? मृत्युपछि 'नर्क' गइनेछ !
४० हजार वर्षदेखि हिउँमा पुरिएको भेटियो ब्वाँसोको टाउको
रक्सी पिएको एक घन्टामा शरीरलाई यस्तो असर पुग्छ
म्यान्मारका महिला चिकित्सकले पोस्ट गरिन् हट फोटो, लाइसेन्स रद्द